Iwe unogona ikozvino kurenda Mac mini M1 kwemaawa mugore | Ndinobva mac
Iwe unogona ikozvino kurenda Mac mini M1 neawa iri mugore
Kana iwe uchida kuzviongorora pachako mashandiro matsva eApple Silicon makomputa anoshanda, ikozvino unogona kuroja Mac mini ine M1 gore processor, pamutengo unodhura kwazvo. Zvinoratidzika kunge zvakapusa asi hazvisi.
Tiri munguva yedenda, uye teleworking yave kuita kunge inosungirwa kune mamwe matunhu, kusanganisira aya evanogadzira application. Kunyangwe iwe uri wekuzvimiririra mushanduri unoshanda wega, kana iwe uri wekambani hombe uye unoshanda kubva kumba, uchihaya Apple Silicon yekuyedza kuyedza kunogadzirisa dambudziko kwauri, uye haichakumanikidze kukutenga Mac nyowani kuyedza kunyorera kwako pane M1 processor.
Kuwana Mac mini mugore kwanga kwatova kugona kubvira kupera kwegore rapfuura. Amazon Web Services (AWS) yakatanga kupa mukana weiyo Mac mini (Intel) yuniti pane imwe Euro paawa, muma24-awa mapakeji. scale way, yeEurope gore services services, ikozvino inopa M1 processor vhezheni yeMac mini na 0,10 € paawa, ihwohwo hushoma hwakaenzana maawa makumi maviri nemana.
Pasina kupokana, iri basa rinotarisana zvakanyanya ku zvikwata zvekusimudzira IOS uye macOS zvinoshandiswa. Zvinonyanya kubatsira kushandisa nzira iyi kuyedza kamwe -chete muApple Silicon nharaunda pane kutenga zvigadzirwa zvitsva kune vese vanogadzira vanoshanda purojekiti, uye zvakatonyanya kana vakashambadza kubva kumba.
Nokubata basa, unokwanisa kuwana maawa makumi maviri nemana kubva pakombuta yako kuenda kuMac mini M24 ine yazvino vhezheni ye macOS Big Sur uye Xcode. Iyo yakanaka nzira yekuita yakatarwa bvunzo yemapurojekiti mukuvandudza pane Apple Silicon.
scale way yakaisa yayo nyowani Mac mini M1s munzvimbo yayo yedhorobha DC4 dhatabhesi inochengeterwa in a former a nuclear fallout shelter 25 metres underground in Paris, France. Kutanga nhasi, Scaleway vatengi vanogona kubatsirwa kubva kuMac mini M1 kubva chero kupi zvako pasi, kwemasenti gumi paawa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Mac Mini » Iwe unogona ikozvino kurenda Mac mini M1 neawa iri mugore
Iyo yekutanga beta ye macOS 11.3 yatove mumaoko evanogadzira
Billie Eilish atove netrailer yepamutemo yeApple TV + zvinyorwa